Nepali Novel Book >PagalPremee< Read/Download Online Free - Page6Of 23 - ImNepal.com 1
Get here post about Nepali sahitya. We have here publishedaNepali novel or upanyas, written Jitendra sahayogee. It’s one of the unique Nepali novel in the Nepali literature world. All the words in this novel are starts from Nepali letter ‘pa’. You can read here in this post as the book ‘pagalpremee’.
पंकज प्रतिदिन पुसनपुरबाट पुरनपुर पधाथ्र्यो । पाठशालामा पधारेर पढाउँथ्यो । पाठनीय पुस्तक पढाउँथ्यो । पढाइसकेपछि प्रतिदिन पंकज पुस्तकालय पुग्थ्यो ।
पुस्तकहरु पढ्थ्यो । पठनीय पुस्तक पंकजले पढ्थ्यो । प्रेमका पुस्तकहरु पढ्थ्यो । परम्पराको पुस्तकहरु पढ्थ्यो । पूजाको पुस्तिका पनि पाएपछि पढ्थ्यो । पत्रिकाको प्रकाशकीय पनि पढ्थ्यो । प्रबन्धकाव्य पनि
पढ्थ्यो । पाक पद्धतिबारे पंकजले पढ्थ्यो । पाचन प्रणालीबारे पढ्थ्यो । पाक्षिक पत्रिका पढ्थ्यो । पहिलेका परिलेखहरुको पार्श्वशिर्ष पनि पढ्थ्यो । परिमार्जित प्रेमका पुस्तकहरु पढ्थ्यो । परिमार्जित प्रेमकथाहरु पढ्थ्यो । पंकजले परियोजनाहरुबारे पढ्थ्यो । पढाइको प्रसङ्गमा प्रशस्त परियोजनाहरु पढ्थ्यो । परिवर्जिर्त परिलेख पढ्थ्यो । परिमार्जित पुस्तकको परिवर्धित पाठ पढ्थ्यो । प्रगतिशील पटकथा पढ्थ्यो । पंकजले पटक पटक पटकथा पढ्थ्यो । प्रतिबन्धित पुस्तकहरु पनि पढ्थ्यो । परिहासका पुस्तकहरु पंकजले पढ्थ्यो । पुराणकथा पनि पढ्थ्यो । पुराण पनि पढ्थ्यो । पूरा पुराण पढ्न पाएन । पन्ध्रोटा पुराण पढ्यो । पत्रिकाको परिशिष्टाङ्गमा प्रेमका प्रसङ्गहरु पढ्थ्यो । पुराना पुस्तकहरुको परिशिलनबाट पंकजले प्रशस्त पाठहरु पढ्थ्यो । प्रकाशकीय परिलेख पनि पढ्थ्यो । पुस्तकको परिशिष्ट पनि पढ्थ्यो । पुस्तकको प्राक्कथन पनि पढ्थ्यो । पुस्तकको प्राक्कथनले परमानन्द पाउँथ्यो । पुस्तकका पानाहरु पर्लक पर्लक पल्टाउँथ्यो । पठनशील पंकजले पुस्तक पढ्थ्यो । पंकज पढन्ता पुरुषमा पर्दथ्यो । परिआएमा पन्चाङपत्र पनि पढ्थ्यो । पंकजले पदार्थविज्ञान पढ्थ्यो । पंकजले प्रेमविज्ञान पढ्थ्यो । पुस्तकको पादटिप्पणी पढ्थ्यो । पुनरावृति पाठ पढ्थ्यो । पंकजलाई पढ्नलाई प्रयाप्त पलहरु पाउँदैनथ्यो । परन्तु पढ्थ्यो । पुस्तक पढ्न पाए, पंकजले पुनर्जागरण पाउँथ्यो, पुनर्ताजगी पाउँथ्यो, प्रज्ञा पाउँथ्यो । पंकजको पढाइमा पनि परिपक्वता पाइयो । पढ्दा पढ्दै पंकजलाई पट्याएपछि पुरनपुरको पुस्तकालयबाट पुसनपुरतिर पधार्‍यो । पुरनपुरको पाठशालाबाट पुसनपुर पधाथ्र्यो ।
पंकज पुण्यशीलमा पर्छ । पंकज पाठशालामा पढाउँछ । पढाउनु पनि पुण्यकर्मभित्र पर्दछ । परन्तु पंकज पूर्णतया परमात्मा प्राप्तिको पदासिन पुण्यशील पुरुषमा पर्दैन । पुरनपुर पधार्दा पदमिनीलाई पनि प्रायः पोखरीनिर पाउँथ्यो । पदमिनीसँग पंकजको पत्रमित्रताको पानी पलाइरहृयो ।
पाँचौपटक पाठशाला पधार्दा पाठशालामा पंकजले पुरुषोत्तमलाई पायो । पंकजले पुरुषोत्तमलाई पहचान्यो । पुरुषोत्तमले पनि पंकजलाई
पहचान्यो । पैन्ट पहिरिएको पंकजले पाइजामा पहिरिएको पुरुषोत्तमलाई पहचान्यो । पुरुषोत्तमसँग पंकज पाठशालाका परिधिबाहिर पुग्यो । पन्ध्र पतक्षर पुर्वकालका पलहरुमा पंकजले पानी पारिरहृयो । पन्ध्र पुसकाल पहिलेका पलहरुको पुस्तकबाट पानाहरु पंकजले पल्टायो ।
पुसनपुरको पाठशालामा पुरुषोत्तमसँग पंकज पढ्थ्यो । पन्ध्र पतक्षर पुर्वको पलमा पुसनपुरमा पढदा पुरुषोत्तमले पंकजको पच्चीस पैसा पनि पच पारेथ्यो । पुरुषोत्तमले पंकजको पच्चीस पैसा पनि पचाएथ्यो । पैसा पचायो, पचायो, पछि पगाहा पनि पच पार्‍यो, पुरुषोत्तमले । पुरुषोत्तमले पंकजको पगाहा पचास पैसामै पच पारेथ्यो । पुरुषोत्तमले पचाएको पंकजको पैसा पंकजले पाएन । पुरुषोत्तमबाट पंकजले पगाहाको पचास पैसा पनि पाएन । पाठशालामा पंकजको पटरी पनि पुरुषोत्तमले पच पारेथ्यो ।
परिआएमा पैसावालको पैसा पनि पचाउनुपर्छ । परधन पचाउनुपर्छ । परिआएमा परधनमा पानी पोख्नुपर्छ । परिआएमा पैसावालको पैसा पनि पचाउनुपर्छ । परन्तु पंकज पैसावाल पुरुषमा पर्दैनथ्यो ।
पन्ध्र पुषकाल पहिलेका पुस्तकका पानाहरु पंकजले पल्टायो । पुरुषोत्तमलाई पाठशालामा पाएपछि पुरुषोत्तमसँग पंकज पुरुषोत्तमको प्राङ्गनमा पनि पुग्यो । प्रमिलाले पदमिनीको पत्रमित्र पंकजलाई पहचानिन् । प्रमिला पुरुषोत्तमकी पत्नीमा परिन् । प्रमिलाबारे पूर्ण परिज्ञान पाएपछि पंकजले परमानन्द पायो ।
पटरी पचाएको पन्ध्र पतक्षरको पूर्ण पलहरुपछि पंकजले पटुवा पटाइरहँदा पुरुषोत्तम पटुवाबारी पुग्यो । पंकजको पटुवाबारी पुगेको पुरुषोत्तमलाई परैबाट पंकजले पहचान्यो । पसिना पुछेपछि पंकजले पुरुषोत्तमलाई पुकार्‍यो ।
“पटुवाबारी पट्यो -” पुरुषोत्तमले पंकजलाई पुछ्यो । परिश्रमी पुरुषोत्तमले परिश्रमी पंकजलाई पुछ्यो ।
“पट्दैछ । पटुवाबारी पैनीको पानीले पट्दैछ । पटेरलाई पटाउनु पर्दैन । पटुवालाई पटाउनुपर्छ । परिआएमा पहाडको पाखामा पनि पानीले पटाउनुपर्छ । परिआएमा पर्तीलाई पानीले पटाउनुपर्छ । पैनीको पानीले
पटाउदैछु । प्रमिलालाई पट्यायौं -” पसिना पुछुवाले पसिना पुछ्दै पंकजले पुरुषोत्तमको प्रश्नमा प्रत्रि्रश्न पुछ्यो । परिश्रमी पंकजले परिश्रमी पुरुषोत्तमलाई पुछ्यो ।
“पाँच पलमै पत्नी पटिन्छिन् ।” पुरुषोत्तमले पुनः पुछ्यो, “पटेरलाई पनि पटाउँछौं ?”
“पटाउदिनँ । पटेर पटाउदिनँ ।” पंकजबाट पुरुषोत्तमले परिज्ञान पायो ।
परतिर परिश्रमी पुरनपुरवासीहरु पोखरीको पानीमा पटुवा पखाल्दैथ्यो । पोखरीमा पडेको पटेला पक्रदैथ्यो । पोखरीमा पानी प्रशस्त पाइन्थ्यो ।
परिश्रमीले परिश्रमीलाई पत्याउनुपर्छ । परिश्रमीहरु पटवाँझमा पनि पधार्छन् । परिश्रमीहरु पटबाँझमा पसिनाको पानी पार्छन् । परिश्रमीहरु पटबाँझलाई पनि पटाउन पन्छिइदैनन् । परिश्रमको पसिना पर्तीमा पनि पर्नुपर्छ । पृथ्वीमा पसिनाको पानी पार्नुपर्छ । पुरुषले परिश्रमको पसिनालाई पुज्नुपर्छ । परिश्रमीहरुले पसिनाको पानी पार्छन । परिश्रमीहरुले पसिनाले पत्थर पगाल्छन् । परिश्रमीहरु पसिनाको पोखरीमा पौड्छन् । परिश्रमीहरु पसिनालाई पहिचान्छन् । परिश्रमी पंकजले पहिले पटुवा पटायो ।
पंकजले पसिनालाई पुनः पुछ्यो । पसिनामा परिमल पनि पाइदैन । परिश्रमको पसिना पर्तीमा पनि पर्नुपर्छ । पसिनाको पानी पर्नुपर्छ । परिश्रमीहरुले पसिनाको पानी पार्छन् । परिश्रमीहरुले पसिना पत्थर पगाल्छन् । परिश्रमीहरु पसिनाको पोखरीमा पौड्छन् । परिश्रमीहरु पसिनालाई पहचान्छन् । परिआएमा पट्वाँझ पनि पानीले पटाउनुपर्छ । परिश्रमीले पसिनालाई पवित्र पानीमा पार्छन् । पंकज पनि पानीको पवित्रतालाई पहचानेथ्यो ।
पटुवा पटाउँदा पंकजलाई प्यासले पिरोल्यो । पोखरीको पानी पिएन । पोखरीको पानी पिउनुहन्न । पैनीको पानी पनि पिएन । पैनीको पानी पनि पिउनुहुन्न । परीक्षणीय पानी पिउनुहुन्न । पंकजले पंकजको पिताद्वारा पठाइएको पानी पियो । पोसिलो पानी पियो ।
पटुवाबारी पटाइसकेपछि पुरुषोत्तमसँग पंकज पोखरीतिर पधार्‍यो । पङ्कलि पाइजामा पुरुषोत्तमले पैनीमा पखाले पनि पंकजले पङ्कलि पैन्टलाई पोखरीमा पखाल्यो । पदमाकारमा पैन्ट पखाल्यो ।